Wepụtara nkọwa na ọnụahịa nke Moto Z4 na Z4 Force | Gam akporosis
Wụkchara nkọwa na ọnụahịa nke Moto Z4 na Z4 Force
Anyị ekwuola na mbụ Moto Z4, otu etiti etiti ụlọ ọrụ nke Lenovo nke ga-abanye ahịa n'oge na-adịghị anya.
Ugbu a, onye nyocha, aha ya bụ Andri Yatim, bụ onye na-agba agba mgbe niile banyere ekwentị Motorola ruo ọtụtụ afọ ekpughere. nkọwa dị iche iche na ọnụahịa nke ngwaọrụ a. Na mgbakwunye, ọ na-leaked isi nkọwa na price nke Moto Z4 Force.
1 Moto Z4: ọnụahịa na nkọwa akọwapụtara
2 Moto Z4 Force: ọnụahịa na nkọwa
Moto Z4: ọnụahịa na nkọwa akọwapụtara
Dị ka ozi nke Yatim si kesaa, Moto Z4 ga - abata na ihuenyo OLED 6.4 inch nke ga-akwado mkpebi FullHD + ma jikọta onye na-agụ mkpịsị aka ya n'onwe ya.
The mobile ikpo okwu Snapdragon 675 ga-eme ka smartphone dị ike. SoC ga-akwado 6GB Ram ma ga-abịa na nwa amaala nchekwa nke 128GB. N'otu oge ahụ, mobile ga-abata na chassis gosiri IP67, nke na-enye mgbochi mmiri na ájá.
Ndabere azụ nke ekwentị ga-enwe a 48 megapixel Smart AI otu igwefoto nwere oghere f / 1.6. Iji weghara onwe gị, a ga-eji oghere 24,8 MP f / 1.9 gaa n'ihu ya. N'aka nke ọzọ, Moto Z4 ga-enwe ikike batrị 3,632 mAh. Nkọwa gara aga ekwuola na ọ ga-abata na nkwado maka teknụzụ na-agba ngwa ngwa ngwa ngwa TurboCharge.
Onye ozi ahụ kwuru na Moto Z4 ga - abia na ugwo $ 399. Akụkọ ndị gara aga ekwuola na ọ ga-ebupụta na nchekwa 4GB Ram + 64GB na iche iche 6GB Ram + 128GB.
Moto Z4 Force: ọnụahịa na nkọwa
Nyefee nke mbụ leaked Moto Z4
Moto Z4 Force ga-abụ ihe dị iche na nke mbụ dị elu karịa ga-abata nri site na Snapdragon 855, ihe na - eme ka ọ bụrụ ọkwa dị elu. SoC a ga - enyere 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa nchekwa dị n'ime aka aka.
Onye na-agwa ha ekesaraghị ihe oyiyi nke Z4 Force. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị gosipụtara nke ahụ enwere ohere na ọ ga-abata na otu ihuenyo nke Moto Z4 na-eburu. Ọ ga-onwem na ihe ngosipụta mkpisiaka nyocha.
Motorola's Moto Z4 Play na-abịa - ugbu a nweta asambodo FCC
Ama ama ga-eweta ihe dị iche Nchikota Sony na OmniVisio ihe igwefoto okpukpu aton. Ntọala igwefoto atọ nke Z4 Force nwere ike ịgụnye ihe nrịbama mbụ nke 48-megapixel nwere oghere f / 1.6, ihe mmetụta 13-megapixel nke abụọ nwere oghere f / 1.8, yana oghere f / 2.0 telephoto lens. Ga-enwe otu selfie dị na Moto Z4 smartphone (24,8 MP si f / 1.9).
Ọ ga-enwe batrị pere mpe nke ikike 3,230 mAh. Banyere ahịa, Z4 Force ga-akụ ahịa maka ihe dịka $ 650.
N'ikpeazụ, isi iyi ahụ kwukwara na Motorola nwere ike ịkpọsa Moto Mods ọhụrụ n'akụkụ usoro Z4. Agbanyeghị, ọ kesaraghị ozi gbasara oge mwepụta nke Z4 na Z4 Force.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Wụkchara nkọwa na ọnụahịa nke Moto Z4 na Z4 Force
Akụkọ ifufe, ma ọ bụ mgbe MMO nwere ike ịhapụ ya site na mma ya na eserese ahụ
HTC na-ezube ịmalite ebe etiti ọhụrụ wee gafee ya na Geekbench